Xasan Cali Kheyre oo raalli gelin ka bixiyay Dhibkii ka dhacay Guriga C/raxmaan C/shakuur | Allbalcad Online
Home WARARKA Xasan Cali Kheyre oo raalli gelin ka bixiyay Dhibkii ka dhacay Guriga...
Xasan Cali Kheyre oo raalli gelin ka bixiyay Dhibkii ka dhacay Guriga C/raxmaan C/shakuur
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa caawa hoyasho ugu tagay hoyga Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame, waxaana kulankan uu ka dambeeyay dadaalo dhex dhexaadin ahaa oo ka soo bilowday Nairobi.
Xasan Cali Kheyre oo uu wehliyay Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Senator Dhagdheer ayaa tagay hoga C/raxmaan C/shakuur, isla markaana si wanaagsan loo soo dhoweeyay.
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre ayaa qoraal uu bartiisa soo geliyay waxaa uu ku sheegay inuu raalli gelin ka bixiyay dhibkii ka dhacay 17-ka December 2017 isaga iyo ilaaladiisa ka soo gaaray, oo ahaa weerar Ciidanka Nabadsugida ku qaaday, laguna dilay lix ka tirsan ilaaladii C/raxman C/shakuur.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka raalli gelinta Xasan Cali Kheyre:-
Waxaan caawa hoygiisa ku soo booqday hogaamiyaha xisbiga wadajir, ahna musharrax madaxwayne ee jamhuuriyada federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdiraxman cabdishakuur Warsame, halkaas oo aan si walaaltinnimo ku dheehantahay isugu soo qalbi xaarannay.
Waxaanan ka raalli galiyay dhibkii 17kii December 2017 isaga iyo ilaaladiisa kasoo gaaray dhacdadii ka dhacday hoygiisa.
Previous articleMusharaxiinta Madaxweyne oo Caawa kulamo gaar gaar ah Muqdisho ku yeeshay